Amazwe e-UNWTO afuna ukuhlangulwa kunye ne-Saudi Arabia iphendula ngeebhiliyoni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Amazwe e-UNWTO afuna ukuhlangulwa kunye ne-Saudi Arabia iphendula ngeebhiliyoni
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
11 imiz efundwayo
Umnxeba ongxamisekileyo wokhenketho
911, ithini ingxamiseko yakho? ISaudi Arabia iphendula kwiNgxaki yoKhenketho lweHlabathi ngeebhiliyoni zeedola ukuba zichithwe. Elinye ilizwe lenza okungaphezulu kokuthetha, lichitha imali enkulu ukuhlangula ukhenketho lwehlabathi kunye nomzi-mveliso wokhenketho- kwaye ayisiyiyo nje into yokuqala yokuphendula.
Senza imbali namhlanje! ” Le yingxelo yenkwenkwezi ekhanyayo kushishino lokuhamba nokhenketho eTurboNews yapapashwa ngo-Okthobha u-6 kunyaka ophelileyo.
Inkwenkwezi yayingoyena mfazi unefuthe kukhenketho ngelo xesha, uGloria Guevara. Ngelo xesha wayeyi-CEO ye IBhunga lezoKhenketho lweHlabathi kunye noKhenketho (WTTC). Wayengazi nokwazi ukuba ngubani oza kushukumisela eli shishini kwinqanaba nakweli candelo kwaye nehlabathi alibonanga ukuba angaba namhlanje.
Namhlanje iZiko lezokhenketho kunye nezokhenketho liza kunye endaweni enye: eRiyadh, Saudi Arabia. Oku kungachaza inyathelo lokuqala le-UNWTO (Umbutho wezoKhenketho weHlabathi) ukufudusa ikomkhulu lisuka eSpain liye eSaudi Arabia.
Ikamva kunye nokuvuselelwa kwelinye lamashishini amakhulu kwihlabathi liphela kunokuba sezandleni zesizwe esinobabalo, uBukumkani baseSaudi Arabia.
Inkokeli enombono ka-2030 emva kwayo yonke le nto, ukuba iphumelele, iya kuba ngu-Mphathiswa Wezokhenketho eSaudi Arabia, Mhlonishwa. Ahmed Al-Khateeb. Inenekazi elixhasa uhlaziyo kukhenketho lwehlabathi inokuba ingumphathi we-WTTC, uGloria Guevara waseMexico, ngoku osebenza njengomcebisi ophambili nomphathiswa ofanayo, u-Ahmed Al-Khateeb.
I-G20 isenokuba ikwangumhla uGloria Guevara afumana ngawo umsebenzi, akazange akwazi ukwala. Isizathu sokuba angala ukwala ayinakuba kuphela ngumvuzo osempilweni ilizwe laseSaudi Arabia elinokulufumana kodwa ukungaguquguquki kwakhe ekuqaliseni kwakhona uhambo nokhenketho kwihlabathi.
Njengokuba kunjalo, iSaudi Arabia ichitha phantse i-500 yezigidigidi zeedola zaseMelika ukwakha ishishini lokhenketho kwihlabathi kwilizwe lalo, kodwa nasekuncedeni nasekutyalomali kwabanye.
Ngelixa imali isomile kumazwe amaninzi ukubeka umva kolu shishino, i-Saudi Arabia etyebileyo ngeoyile ibona utyalo-mali lwayo kukhenketho kungekuphela nje njengamathuba okuphumelela / okuphumelela kodwa njengegalelo kwihlabathi.
Ngo-Meyi ka-2021 i-WTTC phantsi kobunkokheli bukaGloria Guevara yaphumelela kwingqungquthela yokuqala yehlabathi yeenkokheli zokhenketho ukuba zihlangane eCancun, eMexico.
Iinjongo zakhe njenge-CEO ye-WTTC, umbutho oneenkampani ezinkulu kwezokhenketho njengamalungu, yayikukuhlangula icandelo labucala. UGuevara wayejonge ulungelelwaniso lwamanye amazwe. Impendulo ivela eSaudi Arabia ipakishwe nesimemo sokuya kwi-G20. Eli ibilixesha lokuqala ukumenywa kwabachaphazelekayo babucala.
Yile nto ibifunwa lishishini labucala, intsebenziswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala kunye nezo zinokwenza umahluko.
Ingqungquthela yokuqala yokuhamba nokhenketho kwihlabathi ukusukela oko kwaqhambuka i-COVID-19 yenzekile. Indawo leyo yayiyidolophu ekuchithelwa kuyo iiholide eCancun eMexico. Umntu ozingcayo uGloria Guevara, owayenesikhundla sikaNobhala wezoKhenketho eMexico ukusukela nge-10 Matshi 2010, ukuya nge-30 kaNovemba ka-2012, waqukumbela le ngqungquthela iphumeleleyo yonxibelelwano kunye nethemba kwihlabathi lezokhenketho.
Ngubani owayengekho eMexico, yayinguNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili.
UZurab nangona kunjalo akekho eSaudi Arabia. Ngelixa ukuma kwakhe ngokusesikweni kukuba engenangxaki nelizwe elisingathiweyo le-UNWTO eSpain, i-UNWTO sele ivule i-ofisi yengingqi eSaudi Arabia.
Ngokwengxelo zeendaba zaseSpain, oonozakuzaku baseSpain naseSaudi Arabia babexakeke kakhulu emva kwale ndawo.
Uninzi lwamalungu e-UNWTO, ngakumbi amalungu e-UNWTO angamalungu ebhodi elawulayo e-arhente edibeneyo ye-UN baziva belahliwe yi-UNWTO okoko uZurab wathabatha ulawulo. I-UNWTO ayinabo abantu, imali, kunye nezixhobo ezikhoyo ukwenza umahluko obonakalayo kumalungu ayo ahlawulelayo. Amalungu ahlala evakalelwa kukuba akashiywanga nje kuphela kodwa agqityiwe. Ubulungu kwi-UNWTO abukho ngexabiso eliphantsi, ngakumbi xa ishishini lihamba kweyona ngxaki imbi kakhulu.
Konke oku kungaphela ukuba i-UNWTO HQ ingahanjiswa eSaudi Arabia, kwaye iyakunyanzelwa ukuba iphinde isebenze neminye imibutho, enjenge-WTTC. Umbhalo sele useludongeni. Zombini i-UNWTO kunye ne-WTTC sele zivule iofisi yengingqi eRiyadh. Oku kubhengezwe kwi-G20. ISaudi Arabia ikulungele ukuhlangula kwaye iphindeqalisa ukhenketho. Eminye imibutho ikwinkqubo, uninzi lucinga ngokuba nonyawo eSaudi Arabia.
Eluntwini, iSpain ithe cwaka ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ngokutsho kwemithombo ethembekileyo eMadrid, iSpain inomsindo. Xa uqhagamshelana naye eTurboNewsIcandelo loMphathiswa Wezokhenketho eMadrid khange liphendule.
Ngokwengxelo zamajelo eendaba aseMadrid, amagosa aseSpain acebise ukulungiswa kwexesha elide kweKomkhulu le-UNWTO ukuze kulungiswe iziphene njengombuki zindwendwe osisigxina.
Oku nangona kunjalo kunokufika kancinci emva kwexesha, kuba amazwe ebenkqonkqoza emnyango weSaudi Arabia ukuxhasa intshukumo ye-UNWTO HQ eya eBukumkanini.
Wonke amazwe alambele utyalomali kunye nenkxaso mali xa kufikwa kukhenketho, kwaye iSaudi Arabia sele iphendule kwiminxeba emininzi engxamisekileyo.
Inkwenkwezi engenakuphikiswa ephumeleleyo kwiNgqungquthela yeWTTC eCancun, ngaphandle kwamathandabuzo, yayinguMphathiswa Wezokhenketho waseSaudi Arabia. Iindwendwe ezininzi zatsho eTurboNews esona sizathu sokuya kwabo kule ndibano yayikukudibana negqiza laseSaudi Arabia. Imali yathetha eCancun kwaye ngoku iyathetha.
UMphathiswa ovela eSaudi Arabia ufumene imbuyekezo kunye nokunakanwa eCancun xa umphathi weWTTC uGloria Guevara evula iingcango zento esiyibonayo namhlanje.
Kuninzi ekufuneka kwenziwe, tnantsi ukungabikho kokusesikweni kunye nemiceli mngeni eTurboNews uxelwe kwindibano.
Kuya kubakho ingomso elitsha lokhenketho eliqikelelweyo eTurboNews umshicileli uJuergen Steinmetz malunga nenyanga edlulileyo. Le entsha ngomso okanye abanye bathi imeko yesiqhelo entsha sele iqalile. Kubonakala ngathi i-Saudi Arabia ivela njengomcinga ocacileyo kunye nenkokeli.
Baninzi abathethi kwilizwe lokhenketho. Babandakanya ii-CEO, abaphathiswa, kunye neentloko zemibutho. Ilizwe ngalinye linengxaki enye ngokufanayo: Ingxaki kukuba akukho zisombululo, akukho mali yokuxoxa ngezisombululo ezikhoyo. Akukho mntu waziyo indlela yokuhlangula ukhenketho kunye nezigidi zabachaphazelekayo abaqeshwe.
Ndikunye nomhlobo eRiyadh, amaphupha anokufezekiseka. Zingabiza, kodwa zikhona izisombululo, kwaye i-Saudi Arabia ibiphendula iifowuni ezingama-911 (112) njengomhlobo nesizwe esibonakala ngathi sikhathalele ngeli shishini, abantu abasebenza kweli candelo, nakwamanye amazwe akwimeko emaxongo. .
Emva kwayo yonke loo nto, ngelixa ukhenketho lungeyonto intsha eSaudi Arabia, ukuvula ukhenketho olusentshona eBukumkanini kuyinto entsha, kwaye ukunceda ilizwe liphela kunokuba yingxaki yenkcubeko, kodwa kunye nethuba leshishini kwixesha elide lobukumkani.
Hon. U-Edmund Bartlett kunye no-HE Ahmed Al Khateeb baya kudibana kwiNgqungquthela ye-Afrika yoBuyiselo loKhenketho
Simi phi ngoku?
Ukujonga kwinqanaba labaphathiswa, kuphela liqaqobana labaphathiswa abazama ukwenza umahluko. Ngokuqinisekileyo phakathi kwabo kukho i-Hon. UEdmund Bartlett waseJamaica.
Bartlett kunye UAl-Khateeb utyikitye uxwebhu lwentend kutshanje, bobabini benxibe umnqwazi kaBob Marley. Ukufikelela kukaBartlett kumazwe aphesheya kugxile ngokucacileyo kwi-Saudi Arabia.
I-G20 isenokuba ikwangumhla uGloria Guevara afumana isithembiso somsebenzi eSaudi Arabia, ngekhe ale. Ikwakungumsitho xa i-Saudi Arabia ithembisa iibhiliyoni zeedola zenkxaso yehlabathi kwicandelo- kwaye izalisekisa isithembiso.
Yintoni uSihlalo weNethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi ayicingayo:
UJuergen Steinmetz, usihlalo we Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi Umgcini weqela ukwakha uhambo kwakhona ingxoxo yathi:
"Ukhenketho lweHlabathi ludinga uncedo, kwaye iSaudi Arabia iyaphendula. "
USteinmetz, okwangumshicileli we eTurboNews Wongeze: "I-WTN kutsha nje iqale ukusebenza kakhulu Iqela elinomdla laseSaudi Arabia phantsi kobunkokheli be Ukuphakama kwakhe kwasebukhosini uGqirha Abdulaziz Bin Nasser Al-Saud.
”Ayisiyonyani ngokubonakala ngathi unike amandla okhenketho kwilizwe elinye. Imalunga nokusebenza nabenzi hayi abalandeli kunye nabathethi kuphela. ISaudi Arabia ngumenzi kwaye ibonakalise ubunkokeli obuninzi kushishino lokuhamba nokhenketho ngeli xesha lobunzima kunamanye amazwe edityanisiwe.
“ISaudi Arabia ibeka imali yayo ngasemva kwizithembiso. Andiboni nto iphosakeleyo apha. Ezokhenketho ziya kuhlala ziyimizi-mveliso emininzi yommandla. Emva kwayo yonke loo nto, ihlala iyishishini lokuzingca apho iindawo ezikhuphisana khona.
“Ukuba neziko lezokhenketho kwindawo enye ngumbono omkhulu. Ukuba umbindi weziko elinje lehlabathi unemali yokulenza lisebenze, kuvakala ngathi loloyiso kwilizwe lezokhenketho.
“Ukuba neziko lezokhenketho kwihlabathi jikelele oko akuthethi ukuba eli hlabathi lidala umbono wehlabathi okanye urhulumente wehlabathi wokhenketho. Ayinanto yakwenza nezopolitiko zelizwe elisingathiweyo. Umbono welizwe awunakuze ulawule uKhenketho lweHlabathi. UManyano lweZizwe eziManyeneyo umzekelo ayisiyiarhente yase-US, nangona ibanjelwe eMelika. Mhlawumbi ngenye indlela ejikeleze. Ngokudibanisa umhlaba kunye nelizwe elisingathiweyo linokufunda, lamkele kwaye livulele izimvo kunye neenkcubeko ezintsha.
“Ukuba neKomkhulu lezoKhenketho endaweni enye akusayi kuguqula iindlela ezahlukeneyo zokubonwa kwezokhenketho kwaye zisebenza kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Ihlabathi elincinci emva kwayo yonke loo nto, kwaye i-Zoom ibonise oku kuthi sonke.
“Simele siqhwabele izandla iSaudi Arabia ngokuphendula iminxeba engama-911. Ilizwe liba ngumphenduli wokuqala kwishishini lethu kwaye linezixhobo zokunceda. ISaudi Arabia ukuza kuthi ga ngoku iphendule ngobabalo nangoncumo. ”
Ukukwaywa kuka-Ben & Jerry kwaSirayeli kubiza...
Iinqwelomoya zaseHawaii zonyula abaLawuli ababini abatsha abaLawulayo
I-UN General Assembly eNew York ihlasele ihlabathi ...
AmaJamani athi auf Wiedersehen ukuwola kunye nokuxhawula izandla e...
Iinyani ezinomdla, ezonwabileyo malunga neCaribbean
UJane Folsom uthi:
Agasti 12, 2021 kwi-05: 53
Uxolo Juergen, andichukumiseki okanye ndiqinisekile ukuba licebo elilumkileyo eli. Kutheni le nto iSaudi Arabia yamkelwe ngelixa benganikanga ziphumo zisemthethweni zokubulala kunye nokuqhawula ilungu leqela le Washington Post ingxelo..Jamal Khashoggie? Kuthekani ngeyelenqe lokutshabalalisa amaZiko oRhwebo lweHlabathi kwi-NYC kwiminyaka engama-20 eyadlulayo ebukumkanini… kwaye uthini ngokusilela kokuhlonitshwa kwamalungelo abasetyhini?
Kungenxa yokuba ilizwe linemali-ngaba oko kulingana nokulunga? I-China inemali eninzi nayo-kutheni iinkokeli zingabathandisi?